Yohane 5 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yohane Kyerɛwtohɔ 5:1-47
Yesu saa ɔbarima bi yare wɔ Betesda (1-18)
Yesu Agya ama no tumi (19-24)
Awufo bɛte Yesu nne (25-30)
Yesu ho adansedi (31-47)
5 Eyi akyi no, Yudafo afahyɛ+ bi dui, na Yesu foro kɔɔ Yerusalem. 2 Ɔtare bi wɔ Yerusalem Nguan Pon+ no ho a wɔfrɛ no Hebri mu sɛ Betesda, na abrannaa anum wɔ ho. 3 Ɛhɔ na na nnipa pii a wɔyɛ ayarefo, anifuraefo, mpakye, ne wɔn a wɔn fã adwudwo deda. 4 *—— 5 Ná ɔbarima bi wɔ hɔ a wayare mfe 38. 6 Yesu hui sɛ ɔbarima yi da hɔ, na na onim sɛ wayare bere tenten. Enti obisaa no sɛ: “Wopɛ sɛ wo ho tɔ wo anaa?”+ 7 Ɛnna ɔyarefo no buaa no sɛ: “Owura, minni obiara a sɛ nsu no fono a, ɔde me bɛkɔ akɔto ɔtare no mu. Sɛ meyɛ sɛ merekɔtɔ mu a, na obi adi m’anim akɔtɔ mu.” 8 Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Sɔre! Fa wo kɛtɛ,* na nantew.”+ 9 Ɛhɔ ara na ɔbarima no ho tɔɔ no, na ɔfaa ne kɛtɛ* fii ase nantewee. Ná saa da no yɛ Homeda. 10 Enti Yudafo no fii ase ka kyerɛɛ ɔbarima a wɔasa no yare no sɛ: “Ɛyɛ Homeda, na mmara mma kwan sɛ wobɛsoa kɛtɛ* no.”+ 11 Ɛnna obuaa wɔn sɛ: “Nea ɔsaa me yare no, ɔno ara na ɔka kyerɛɛ me sɛ, ‘Fa wo kɛtɛ* na nantew.’” 12 Wobisaa no sɛ: “Onipa bɛn na ɔka kyerɛɛ wo sɛ, ‘Fa wo kɛtɛ na nantew’ no?” 13 Nanso na ɔbarima a wɔasa no yare no nnim onipa ko, efisɛ na Yesu afra nnipadɔm a wɔwɔ hɔ no mu. 14 Eyinom akyi no, Yesu huu no wɔ asɔrefi hɔ, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Hwɛ, wo ho atɔ wo. Nyɛ bɔne bio, na biribi a ɛsen eyi anyɛ wo.” 15 Ɔbarima no fii hɔ kɔe, na ɔkɔka kyerɛɛ Yudafo no sɛ Yesu na ɔmaa ne ho tɔɔ no. 16 Asɛm yi nti, Yudafo no tan Yesu ani, efisɛ ɔyɛɛ eyinom Homeda. 17 Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “M’Agya ayɛ adwuma abesi sesɛɛ, na me nso, mekɔ so yɛ adwuma.”+ 18 Eyi koraa na ɛmaa Yudafo no ani bere hwehwɛe sɛ wobekum no, efisɛ ɛnyɛ Homeda nko na na ɔrebu so, na mmom ɔfrɛɛ Onyankopɔn sɛ ɔno ara n’Agya,+ de yɛɛ ne ho sɛ ɔne Onyankopɔn yɛ pɛ.+ 19 Enti Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Nokware, nokware, mereka akyerɛ mo sɛ, Ɔba no ankasa rentumi mmɔ ne tirim nyɛ hwee, gye nea ohu sɛ Agya no yɛ.+ Na biribiara a Agya no yɛ no, ɛno ara na Ɔba no nso yɛ. 20 Agya no pɛ Ɔba no asɛm,+ na ɔkyerɛ no nneɛma a ɔno ankasa yɛ nyinaa, na ɔbɛkyerɛ no nnwuma akɛse asen eyinom ama ayɛ mo nwonwa.+ 21 Na sɛnea Agya no nyan awufo na ɔma wɔn nkwa no,+ saa ara na Ɔba no nso ma obiara a ɔpɛ ba nkwa mu.+ 22 Na Agya no mmu obiara atɛn, na mmom ɔde atemmu nyinaa ahyɛ Ɔba no nsa,+ 23 na ama obiara adi Ɔba no ni sɛnea wodi Agya no ni no. Obiara a onni Ɔba no ni no, onni Agya a ɔsomaa no no ni.+ 24 Nokware, nokware, mereka akyerɛ mo sɛ, obiara a otie m’asɛm na ogye Nea ɔsomaa me no di no wɔ daa nkwa,+ na wɔremmu no atɛn, na mmom wafi owu mu aba nkwa mu.+ 25 “Nokware, nokware, mereka akyerɛ mo sɛ, bere no reba, na adu, sɛ awufo bɛte Onyankopɔn Ba no nne, na wɔn a wɔayɛ aso atie no, wobenya nkwa. 26 Na sɛnea Agya no wɔ nkwa wɔ n’ankasa mu*+ no, saa ara na wama Ɔba no nso anya nkwa wɔ n’ankasa mu.+ 27 Na Agya no ama no tumi sɛ ommu atɛn,+ efisɛ ɔyɛ onipa Ba.+ 28 Mommma eyi nnyɛ mo nwonwa, efisɛ bere no reba a wɔn a wɔwɔ nkae ada mu nyinaa bɛte ne nne,+ 29 na wɔapue. Wɔn a wɔyɛɛ papa no bɛkɔ nkwa wusɔre mu, na wɔn a wɔyɛɛ akyiwade no akɔ atemmu wusɔre mu.+ 30 Merentumi mmɔ me tirim nyɛ hwee. Nea mete fi Agya no hɔ no, ɛno ara na migyina so bu atɛn. Na atɛn a mibu no teɛ,+ efisɛ menhwehwɛ nea me ara mepɛ, na mmom nea ɔsomaa me no apɛde.+ 31 “Sɛ me nko ara midi me ho adanse a, m’adanse no nyɛ nokware.+ 32 Obi foforo wɔ hɔ a odi me ho adanse, na minim sɛ adanse a odi wɔ me ho no yɛ nokware.+ 33 Moasoma nnipa akɔ Yohane hɔ, na wadi nokware no ho adanse.+ 34 Nanso minnye adanse mfi nnipa hɔ, na meka eyinom na moanya nkwa. 35 Ná saa ɔbarima no yɛ kanea a ɛdɛw na ɛhyerɛn, na mo de, na mopɛ sɛ mo ani gye kɛse wɔ ne hann mu kakra.+ 36 Nanso, mewɔ adanse a ɛsen Yohane de no, efisɛ nnwuma a m’Agya de hyɛɛ me nsa sɛ menyɛ no, saa nnwuma a mereyɛ yi, ɛno ara na edi adanse sɛ Agya no na ɔsomaa me.+ 37 Na Agya a ɔsomaa me no, ɔno ara na wadi me ho adanse.+ Mo de, montee ne nne da, na munhuu sɛnea ɔte nso,+ 38 na n’asɛm nni mo mu, efisɛ munnye nea ɔsomaa no no mpo nni. 39 “Mohwehwɛ Kyerɛwnsɛm no mu,+ efisɛ mususuw sɛ ɛno na ɛbɛma moanya daa nkwa; ɛno ara* nso na edi me ho adanse.+ 40 Nanso, mompɛ sɛ moba me nkyɛn,+ na moanya nkwa. 41 Minnye anuonyam mfi nnipa hɔ, 42 na minim yiye sɛ munni Onyankopɔn dɔ wɔ mo mu. 43 M’Agya din mu na mebae, nanso munnye me. Sɛ obi foforo ba ɔno ara ne din mu a, ɔno de, mubegye no. 44 Mo mu biara gye anuonyam fi ne yɔnko nkyɛn, na anuonyam a efi Onyankopɔn koro pɛ no nkyɛn de, munnye.+ Enti ɛbɛyɛ dɛn na moagye adi? 45 Munnsusuw sɛ mɛbɔ mo sobo akyerɛ Agya no. Ɔbaako pɛ na ɔbɔ mo sobo; ɔno ne Mose,+ nea mode mo ani ato no so no. 46 Nokwasɛm ne sɛ, sɛ mugye Mose di a, anka mubegye me adi, efisɛ ɔkyerɛw me ho asɛm.+ 47 Na sɛ munnye nsɛm a ɔkyerɛwee no nni a, ɛbɛyɛ dɛn na moagye nsɛm a meka no adi?”
^ Anaa “mpa.”
^ Anaa “Agya no wɔ tumi a ɔde kyɛ nkwa wɔ ne mu.”
^ Kyerɛ sɛ, Kyerɛwnsɛm no.